Shirkada SKA oo dhowr sano kadib maanta wareejinaysa gacan ku haynta garoonka Aadan cade – Radio Daljir
Seteembar 15, 2013 3:10 b 0
Muqdisho, September 15, 2013 – Shirkada gacanta ku haysa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee la yiraahdo SKA ayaa maanta dhowr sano kadib wareejin doonta maamulka iyo gacan ku haynta garoonkaas, waxaana la filayaa in lagu wareejiyo shirkad cusub oo laga leeyahay Turkiga.
Maanta oo Axad ah wararka laga helayo Muqdisho waxaa ay sheegayaan in shirkada la yiraahdo FAVORI oo laga leeyahay dalka Turkiga ay la wareegi doonto garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, taas oo maamulaysa dib-u-dhisna ku samayn doonta garoonka.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cabdulaahi Ciil-mooge Xirsi ayaa sheegay in shirkada FAVORI ay dowaladdu heshiis la gashay, kaas oo ahaa mid horey loo shaaciyey, wuxuu sheegay in shaqadii shirkada SKA ee garoonka Muqdisho ay dhamaatay.
Ciil-mooge wuxuu sheegay in shirkada FAVORI ay maamulayso garoonka, iyadoo heshiiskeeda uu qeyb ka yahay dhisme iyo dayactir balaaran oo garoonka lagu samaynayo, sidoo kale shirkada ayaa looga fadhiyaa hab maamul wanaagsan iyo nidaam.
30-kii bishii Agoosto waxaa Muqdisho ka digtay diyaarad nooca Boeing 747 oo qalab u siday shirkada la wareegaysa maamulka garoonka Muqdisho ee FAVORI, ??????? qalabka shirkadu keentay ayaa ah mid loogu talo-galay dhismaha iyo casriyeynta Aadan Cade Airport.
Gollaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa dhowaan ansixiyey qorshe ay soo bandhigtay wasaarada warfaafinta, Isgaarsiinta, boostada iyo gaadiidka ee dalka kaas oo dhigayey in shirkad cusub lagu wareejiyo howlaha garoonka, mudane Cabdulaahi Ciil-mooge wuxuu xusay in uusan is bedel ku iman doonin duulimaadyadii garoonka ee ay howluhu sii socon doonaan.